Safkii ugu dambeeyay ee ay wada ciyaareen
Taageerayaasha Manchester United ayaa isha ku haya inay arkaan booska koowaad ee kala sarreynta horyaalka Premier League, ka dib markii ay 1-0 kaga badiyeen Burnley habeenkii Sabtida.
Markii ugu dambeysay ee ay Manchester United hogaanka qabato waxay ahayd 40 bilood ka hor bishii Sebtember 2017, laakiin waqtigaas wuu is beddelay maxaa yeelay waxay ahayd bilowgii xilli ciyaareedka.
Laakiin markii ugu dambeysay ee ay qabato hogaanka bishii Janaayo waxa ay aheyd 2012-13, xilligaas oo uu Sir Alex Ferguson howlgab noqday ka dib markii uu ku guuleystay horyaalka.
Xilli ciyaareedkaan, oo seddex dhibcood ku hogaamineysa hogaanka miiska bisha Janaayo, waxay xusuusineysaa taageerayaasha xafiiltankii labada dhinac markii ugu dambeysay 2008-09.
Manchester United ayaa sanadkaas ku guuleysatay Horyaalka Premier League, waxaana ku xigay Liverpool, waxaana taageerayaasha Liverpool ay u dagaallamayaan inay markale dhacdo.
Sanadkaas, Ferguson wuxuu u horseeday Manchester United 90 dhibcood oo Premier League ah, 28 guul, lix barbaro iyo afar guuldaro oo qura.
Liverpool oo uu tababare u yahay Rafael Benitez ayaa xilli ciyaareedka ku dhamaysatay 4 dhibcood oo kaliya iyada oo ka dambaysa kooxda Man United iyaga oo leh 86 dhibcood. Liverpool ayaa kaliya laga badiyay kaliya afar kulan xilli ciyaareedkan, halka Manchester United laga badiyay lix kulan, laakiin waxa ay sameeyeen in ka badan 11 kulan oo ay ciyaareen.
Edwin van der Sar ayaa saftay 33 kulan oo Premier League ah, halka goolhayaha Liverpool Pepe Reina uu ka mid ahaa 7 ciyaaryahan oo Premier League ah oo ciyaaray 3,420 daqiiqo.
Xiddigaha loo tiriyay inay ka badbaadiyeen Manchester United guul-darrooyinka is-daba-joogga ah waxaa ka mid ah Rio Ferdinand iyo Nemanja Vidic oo ka kala ciyaara garabka ama garabka bidix iyo garabka midig Patrice Evra iyo John O’Shea. Garry Neville.
Rafael Benitez ayaa sidoo kale Jamie Carragher ka dhigtay daaficiisa ugu sareeya, isagoo u saftay 38 kulan oo horyaalka ah, waxaana caawiyey Martin Skrtel iyo Daniel Agger, halka Sami Hyypia loo isticmaalay sidii loogu baahnaa. Bogagga waxaa martigeliyay Avlaro Arbeloa iyo Fabio Aurelio.
Khadka dhexe, Liverpool waxa ay Javier Mashcerano, Xabi Alonso iyo Steven Gerrard ciyaarayeen in ka badan 2300 daqiiqo. Daallan Lucas Leiva, wuxuu sidoo kale sifiican uga ciyaaray garoonka Anfield.
Manchester United waxaa matalayay Paul Scholes iyo Anderson, halka Michael Carrick iyo Darren Fletcher ay ahaayeen lama taabtaan Ferguson.
Sir Alex Ferguson wuxuu ku xooganaa weerarka Cristiano Ronaldo (2749 daqiiqo), Park Ji-Sun (1728 daqiiqo), Ryan Giggs (1,500) iyo Nani (525) oo keydka fadhiyay.
Liverpool ayaa halgan ugu jirtay halkaan Yossi Benayoun (1,890), Alberto Riera (1,988), Dirk Kuyt (14) iyo Fernando Torres (14). Rafa Benitez.
Ryan Babel, Robbie Keane iyo David N’Gog ayaa iyaguna u ciyaara Liverpool.
Laakiin kooxda heysata horyaalnimada ee Manchester United ayaa ciyaartooydii ugu horreysay ee dhaawacmay ku qaadatay mashiinka, iyadoo Dimitar Berbatov (2542 daqiiqo), Wayne Rooney (2264 daqiiqo) iyo Carlos Tevez (1859 daqiiqo) ay dhaliyeen 26 gool. Cristiano Ronaldo kaligiis ayaa dhaliyay 18 gool.
Halkan ka dheeho shaxda labada koox
50 Ultimate Meals for Females
Greater than 80 civilians have been killed in western Ethiopia